(၂၀)ကျော်တွေထက် အသက်(၃၀)ကျော်မမ တွေက ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေရခြင်း အကြောင်းအရင်း(၇)ချက် -
Category : အလှအပရေးရာ
ဒီနေ့ခေတ် အသက် ၃၀ ကျော်အမျိုးသမီးတွေဟာ ၂၀ ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီးလည်းလှ ပိုပြီးလည်းစမတ်ကျကြည့်ကောင်းနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အပေါ်ယံလှနေတာမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုနဲ့ ခံယူချက် စတာတွေကလည်း လေးစားစရာကောင်းနေပြီး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။
အဲ့ဒီလိုမျိုး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံလှပတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေဖြစ်နေတာဟာ ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်နော်….
(၁) အသက်ကြီးလာပြီလို့တွေးပြီး စိတ်ဖိစီးတာမျိုးမရှိဘူး ”
အသက် ၃၀ အရွယ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသက်ရလာပြီ၊ အိမ်ထောင် မပြုသေးဘူးလား၊ ကလေးမယူသေးဘူးလား စသဖြင့် မေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဂရုစိုက်မနေဘဲ အေးအေးဆေးဆေး လစ်လျူရှုနေနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်အတွက် အမှန်တကယ် သင့်တော်တဲ့အရာ ၊ ကိုယ့်ကို စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို သေချာသိပြီးရွေးချယ်နိုင်တာကြောင့် အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့တက်ကြွလှပနေနိုင်တာပါ …။
(၂) ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဖက်ရှင်ကဘာလဲ ကောင်းကောင်းသိတယ် ”
မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်နှာအနေအထား၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား မတူကြတာကြောင့် သူနဲ့လှနေတဲ့ ဖက်ရှင်က ကိုယ်နဲ့ လှချင်မှလှတာပါ။ ဒါကို ၃၀ ကျော်မတ်မတ်တွေက ကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီး ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လိုဖက်ရှင်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်၊ ဘယ်နေရာကို ဘာဝတ်သွားရင် သင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီး သိနေတာကြောင့် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ဖက်ရှင်ကျ၊ ကြည့်ကောင်းနေတာမျိုးပါ …။
(၃) အရည်အသွေးကောင်းတာတွေ ရွေးချယ်တယ် ”
ဈေးပေါတဲ့ပစ္စည်းတွေ အများကြီးသုံးတာထက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အ၀တ်အထည်၊ အိတ်၊ ဖိနပ် စတာတွေကို သုံးတာကြောင့် အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ အလှမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် …။
(၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတယ် ”
မရင့်ကျက်ခင် အချိန်ကလို ကိုယ့်ကို မချစ်တော့တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး ဆွဲမထားတတ်တော့ဘူး၊ ကိုယ့်ကို မလိုလားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွယ်ကပ်နေတာမျိုးတွေ မလုပ်တော့ဘူး၊ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတတ်နေပြီး ကိုယ့်အထာလေးနဲ့ ကိုယ်နေတတ်လာတာကလည်း ၃၀ ကျော်မမတွေ ကြည့်ကောင်းနေရခြင်းထဲက အချက်တစ်ခုပါပဲ …။
(၅) မ၀ံ့မရဲပုံစံမျိုးမရှိဘူး ”
ဒီအချိန်မှာ သင်ယူတတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာတွေကလည်း မနည်းတော့ဘူး၊ အတွေ့အကြုံတွေကလည်း မနည်းတော့ဘူး ၊ ဒါကြောင့် အရင်ကလို မ၀ံ့မရဲပုံစံမျိုးတွေ မရှိတော့ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတယ်၊ အဲ့ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိနေတဲ့ပုံစံကပဲ မတ်မတ်တွေကို ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေတာပါ …။
(၆) ကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်မယ့် အလေ့အကျင့်တွေကိုရှောင်တယ် ”
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ရင့်ကျက်သင့်သလောက် ရင့်ကျက်နေပြီ၊ နားလည်သင့်တာတွေကို သိနားလည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက် ထိခိုက်စေတဲ့ မိုက်ရူးရဲလုပ်ရပ်တွေ မလုပ်တော့ဘူး၊ စိတ်ညစ်စရာတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်မြှုပ်မထားတော့ဘဲ ရုန်းထွက်တတ်လာပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်အောင်ထားတတ်လာပြီမို့ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ဆင်းရဲနေတာမျိုးတွေ မရှိဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေတာပါ …။
(၇) အရှိကိုအရှိအတိုင်း လက်ခံတတ်တယ် ”
အရင်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှဘူးလို့ထင်တဲ့နေရာတွေကို အတင်းပြုပြင်ဖို့၊ ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်၊ အပြစ်အနာအဆာလို့ ထင်ရတဲ့အရာတွေကို အရှိအတိုင်း လက်ခံပြီး နေတတ်လာပြီ၊ အားသာချက်ကို များသထက်များအောင် လုပ်ပြီး အားနည်းချက်တွေကို လက်ခံတတ်လာပြီ၊ ဒီအချက်ကပဲ အသက် ၃၀ ကျော် မမတွေကို ပိုပြီးရင့်ကျက်လှပတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဖြစ်နေစေတာပါပဲနော် …။
(၂၀)ကြျောတှထေကျ အသကျ(၃၀)ကြျောမမ တှကေ ပိုဆှဲဆောငျမှုရှိနရေခွငျး အကွောငျးအရငျး(၇)ခကျြ
ဒီနခေ့တျေ အသကျ ၃၀ ကြျောအမြိုးသမီးတှဟော ၂၀ ကြျောအရှယျမိနျးကလေးတှထေကျ ပိုပွီးလညျးလှ ပိုပွီးလညျးစမတျကကြွညျ့ကောငျးနကွေတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အပျေါယံလှနတောမြိုးပဲမဟုတျဘဲ သူတို့ရဲ့ အပွုအမူ၊ အပွောအဆိုနဲ့ ခံယူခကျြ စတာတှကေလညျး လေးစားစရာကောငျးနပွေီး အဖကျဖကျက ပွညျ့စုံတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈနတောမြိုးပါ။
အဲ့ဒီလိုမြိုး အဖကျဖကျက ပွညျ့စုံလှပတဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှဖွေဈနတောဟာ ဒီအကွောငျးရငျးတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျနျော….
(၁) အသကျကွီးလာပွီလို့တှေးပွီး စိတျဖိစီးတာမြိုးမရှိဘူး ”
အသကျ ၃၀ အရှယျကိုရောကျလာပွီဆိုတာနဲ့ ပတျဝနျးကငျြက အသကျရလာပွီ၊ အိမျထောငျ မပွုသေးဘူးလား၊ ကလေးမယူသေးဘူးလား စသဖွငျ့ မေးတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုသတျမှတျခကျြတှကေို ဂရုစိုကျမနဘေဲ အေးအေးဆေးဆေး လဈလြူရှုနနေိုငျတဲ့အပွငျ ကိုယျ့အတှကျ အမှနျတကယျ သငျ့တျောတဲ့အရာ ၊ ကိုယျ့ကို စိတျခမျြးသာစတေဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို သခြောသိပွီးရှေးခယျြနိုငျတာကွောငျ့ အပူအပငျကငျးကငျးနဲ့တကျကွှလှပနနေိုငျတာပါ …။
(၂) ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ဖကျရှငျကဘာလဲ ကောငျးကောငျးသိတယျ ”
မိနျးကလေးတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မကျြနှာအနအေထား၊ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစား မတူကွတာကွောငျ့ သူနဲ့လှနတေဲ့ ဖကျရှငျက ကိုယျနဲ့ လှခငျြမှလှတာပါ။ ဒါကို ၃၀ ကြျောမတျမတျတှကေ ကောငျးကောငျးနားလညျနပွေီး ကိုယျနဲ့ ဘယျလိုဖကျရှငျနဲ့ လိုကျဖကျတယျ၊ ဘယျနရောကို ဘာဝတျသှားရငျ သငျ့တျောတယျဆိုတာကိုလညျး ကောငျးကောငျးကွီး သိနတောကွောငျ့ ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ ဖကျရှငျကြ၊ ကွညျ့ကောငျးနတောမြိုးပါ …။
(၃) အရညျအသှေးကောငျးတာတှေ ရှေးခယျြတယျ ”
စြေးပေါတဲ့ပစ်စညျးတှေ အမြားကွီးသုံးတာထကျ အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ အဝတျအထညျ၊ အိတျ၊ ဖိနပျ စတာတှကေို သုံးတာကွောငျ့ အဆငျ့အတနျးမွငျ့တဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ ကကျြသရရှေိတဲ့ အလှမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ …။
(၄) ကိုယျ့ကိုယျကို လေးစားတယျ ”
မရငျ့ကကျြခငျ အခြိနျကလို ကိုယျ့ကို မခဈြတော့တဲ့ သူတဈယောကျကို အောကျကနြောကျကခြံပွီး ဆှဲမထားတတျတော့ဘူး၊ ကိုယျ့ကို မလိုလားတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ တှယျကပျနတောမြိုးတှေ မလုပျတော့ဘူး၊ ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုလေးစားတတျနပွေီး ကိုယျ့အထာလေးနဲ့ ကိုယျနတေတျလာတာကလညျး ၃၀ ကြျောမမတှေ ကွညျ့ကောငျးနရေခွငျးထဲက အခကျြတဈခုပါပဲ …။
(၅) မဝံ့မရဲပုံစံမြိုးမရှိဘူး ”
ဒီအခြိနျမှာ သငျယူတတျမွောကျထားတဲ့ ပညာတှကေလညျး မနညျးတော့ဘူး၊ အတှအေ့ကွုံတှကေလညျး မနညျးတော့ဘူး ၊ ဒါကွောငျ့ အရငျကလို မဝံ့မရဲပုံစံမြိုးတှေ မရှိတော့ဘဲ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိတယျ၊ အဲ့ဒီလို ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု အပွညျ့ ရှိနတေဲ့ပုံစံကပဲ မတျမတျတှကေို ဆှဲဆောငျမှုပိုရှိစတောပါ …။
(၆) ကိုယျ့အတှကျထိခိုကျမယျ့ အလအေ့ကငျြ့တှကေိုရှောငျတယျ ”
ဒီအသကျအရှယျမှာ ရငျ့ကကျြသငျ့သလောကျ ရငျ့ကကျြနပွေီ၊ နားလညျသငျ့တာတှကေို သိနားလညျနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျ့အတှကျ ထိခိုကျစတေဲ့ မိုကျရူးရဲလုပျရပျတှေ မလုပျတော့ဘူး၊ စိတျညဈစရာတှထေဲမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို နှဈမွှုပျမထားတော့ဘဲ ရုနျးထှကျတတျလာပွီ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ပြျောအောငျထားတတျလာပွီမို့ စိတျညဈ၊ စိတျဆငျးရဲနတောမြိုးတှေ မရှိဘဲ ပေါ့ပါးလနျးဆနျးနတောပါ …။
(၇) အရှိကိုအရှိအတိုငျး လကျခံတတျတယျ ”
အရငျကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို မလှဘူးလို့ထငျတဲ့နရောတှကေို အတငျးပွုပွငျဖို့၊ ဖုံးကှယျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ဖူးတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတျတော့ဘဲ ကိုယျ့ရဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြ၊ အပွဈအနာအဆာလို့ ထငျရတဲ့အရာတှကေို အရှိအတိုငျး လကျခံပွီး နတေတျလာပွီ၊ အားသာခကျြကို မြားသထကျမြားအောငျ လုပျပွီး အားနညျးခကျြတှကေို လကျခံတတျလာပွီ၊ ဒီအခကျြကပဲ အသကျ ၃၀ ကြျော မမတှကေို ပိုပွီးရငျ့ကကျြလှပတဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှေ ဖွဈနစေတောပါပဲနျော …။
သင့်အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းသွားစေမယ့် ရှားစောင်းလက်ပပ်ပေါင်းတင်နည်း (၄) မျိုး….
သင့်အသားအရေကို ချက်ချင်း ဖြူဝင်းသွားစေမယ့် ရှားစောင်းလက်ပပ် ပေါင်းတင်နည်း (၄) မျိုး…. အသားအရေကို ဖြူဝင်းပြီး ကြည်လင်နေတာကို ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို နည်းလမ်းမှန်မှန် သုံးပေးရင် သင့်အသားအရေကို အလျင်မြန်ဆုံး ဖြူဝင်းသွားစေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီတော့ အသားအရေကို အချိန်တိုအတွင်း ဖြူဝင်းသွားစေမယ့် ရှားစောင်းလက်ပပ် ပေါင်းတင်နည်းလေးကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်နဲ့ သကြား -ရှားစောင်းလက်ပပ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း -သကြားညို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သေသေချာချာ သမသွားအောင် ရောမွှေပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို လိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ စက်ဝိုင်း ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ညင်သာစွာ …
မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ အညိုအမည်း စက်တွေနဲ့ ဝက်ခြံ အမာရွတ် ၊ အချိုင့်အခွက် ပျောက်ကင်း စေမဲ့ သခွါးသီး ကုထုံး
မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ အညိုအမည်း စက်တွေနဲ့ ဝက်ခြံ အမာရွတ် ၊ အချိုင့်အခွက် ပျောက်ကင်း စေမဲ့ သခွါးသီး ကုထုံး မျက်နှာ အညိုအမည်းစက်တွေနဲ့ ဝက် ခြံ အမာရွတ်၊ အချိုင့်အခွက် အပါအဝင် အရေပြားရဲ့ အောက်ဆုံးလွှာ ဖြစ်တဲ့ dermis ဆိုတဲ့ တစ်သျှူးစ ပျက်စီးမှု တွေကို သဘာဝပစ္စည်းနဲ့ ပြန်လည် ပြုပြင်မယ်ဆို သခွားသီး ကုထုံးကိုပဲ လှပျိုဖြူတို့ ရွေးချယ် လိုက်ပါ ။ ( ၁ ) သံပုရာသီး တစိတ်ကို ပန်းကန်ပြားထဲ အရည်ညှစ်ပါ ။ ဂွမ်းလုံးလေးနဲ့ သံပုရာရည်ကို အမာရွတ်ပေါ် တို့လိမ်း ၊ ၁၅ …
ခဏအတွင်း ပိန်သွယ်ချပ်ရပ်သွားစေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ ဆီးဖြူသီးကြိတ်ရည် အကြောင်း
ခဏအတွင်း ပိန်သွယ်ချပ်ရပ်သွားစေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ ဆီးဖြူသီးကြိတ်ရည် အကြောင်း ဆီးဖြူသီးဟာ ချဉ်ပြီးဖန်တဲ့အရသာလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းပြီး ပေါပေါလင်လင်ရနိုင်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား …။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အစာခြေစနစ်ကို အထူးကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝလွန်းတဲ့ သစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် …။ ဒါတင်မကပဲ ဆီးဖြူသီးဟာ အဆီတွေကိုချေဖျက်ပြီး ပိန်သွယ်စေနိုင်တဲ့ အာနိသင်အရှိဆုံးအသီးတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အဆီကျဆေးတွေစားစား၊ ဘယ်လောက်ပဲ အစားတွေလျှော့လျှော့ အဖတ်မတင်ပဲ ဝိတ်မကျနိုင်ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါ …။ လွယ်ကူလွန်းတဲ့အပြင် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်သက်သာပြီး အရမ်းထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးမို့ ပျိုမေတိုင်း လက်တွေ့လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော် …
This Month : 33445
This Year : 204671
Total Users : 499804
Total views : 2067392